October 11, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
“Ofiinuu Duutii Maaf Of Huuti?” – Labsi ‘Yeroo Atattamaa’ TPLF labsite Ilaalchisee Ibsa Hooggana Jiddu-galeesa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname
Wareeegamni Qerroon Bilisummaa Oromoo gootummaan gumaachaa as gahe ummata keenya guyyuu gara Bilisummaa isatti dhiheessaa jiraachuun dhugaa haalamuu hindandeenye dha. TPLFtti guyyaan dukkanawaa dhufuu isaaf labsi isheen mata duree ‘yeroo atattamaa’ jedhuun labsite kana caalaa ragaan guddaan hinjiru. Qabsoo hadhawaa Qeerroon Bilisummaa geggessaa jiruun gartuun yeroo dheeraaf olaantummaa siyaasaan of bokoksaa turte kun guyyaa irraa guyyaatti caccabuu,salphachuu fi diigamuu erga eegaltee bubbulteetti. Gootummaan Qeerroon agarsiisaa jiru mootota TPLF guyyaa saafaa abjchisuu erga eegalee oolee buleera.
Labsiin TPLF ummata keenya irratti labiste kunis Qeerroo Bilisummaa Oromoo caalmaatti qabsichaaf hiriirsa malee tasa of-booda kan hindeebifne ta’uun isaa firaafis ta’e diinaa ifa ta’uu qaba. Ammaan booda taattaaffiin TPLF gootu marti yoo guyyaa du’a ishee gabaabse malee gonkumaa bara angoo ishee dheeressuu hindanda’u. Qeerroon Bilisummaa kafana soba TPLF bara dheeraaf marxifachaa turte sana irraa mulquun bifa dhaloota ishee isa dhugaa, of-irrummaa siyaasaa fi dhiphummaa sanyiin guutame sana addunyaaf saaxileera. Mootummaan ishee rommaa jiraachuu, ummata biratti jibbamtuu fi tuffatamtuu ta’uun ishee, akkasumas nagaa biyyattii eeguuf dandeettii fi amantaa gaha kan hinqabne ta’uu isheef labsii isheen baafatte kana caalaa ragaan hinjiru. Guyyaan isheen yeroo maayyiif angoo biyyatti irra fonqoltus fago hin ta’u.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Gabrummaatti Xumura gochuu akka kaayyoo isa anagafaatti erga labsee waggaa guutuuf deema. Yeroo gabaabdu kana keessatti muratnoo olaanaa agarsiiseen, danbalii siyaasaa biyyatti guutummaatti jijjireera. Mootummaan TPLF hunde-dhabeetti ta’uu ishee gootummaan saaxileera. Ummatni keenya humna-qabeessa qofa osoo hintaane handhura siyaasaa biyyatti fi wabi nagaeenya godina Gaanfa Afirikaa guutummaa ta’uu isaa mirkaneessera. Sochiin Qeeroo mootummaan dantaa ummata keenya moggeessuuf imaammatu hundi tas-gabbii tokko illee qabaachuu akka hindandeenye addunyaa qaabachiiseera. Qeerroon akka qaama qabsoo Bilisummaatti dhaloota haarawaa dammaqsee, ijaaree, bobbaasuun yeroo gabaabaa keessatti injifannoolee siyaasaa gurguddoo saba keenyaa gonfachiiseera. Qeerroon fuulaa fi fuulatti diina saba keenya waliin wal hudhuun hamilee sabni keenya of angomsuu irratti qabu danboobseera.
Sirnoota of-irroo biyya keenya hoongeessa as gahaniif TPLF isa maayyii akka ta’u gochuun dirqama qabsa’ota biyyatti guutummaa addatti ammoo kan sabboontota ilmaan Oromooti. Gartuu saba keenya diinummaatti imaammatee kun yoo hundeedhaan angoo irra buqqa’e malee Bilisummaa Saba Keenyaa fi Walabummaa Biyyaa keenya tasa hinmirkanaa’u. Mirga dhalootaa fi seeraan qabnu kana gonfachuuf akka saba hiree isaa murteeffachuuf qabsa’uu tokkootti xiqqaa-guddaan, dhiiraa-dhaalaan ijaaramnee warraquun yeroon isaa amma. Keessattuu, humna, beekumsaa fi qabeenya keenya walitti qindeessinee diina sanyii keenya duguuguuf abbalaa jiru kana qolachuun dirqama dhalootaati. Ummatni keenya keessaa fi alatti sochii isaa qindeeffatee gartuu aangoo mootummaatti da’attee saamicha dangaa hinqabne sabaa fi biyya keenya irratti raawwachaa jirtu buqqisuuf waan isaaf danda’ame maraan qabsoo isaa utubuun waajiba.
Sochii mirga keenya gonfachuuf goonu keessatti ammoo waan hundaa caalaa harka diinaa jabeessinee of irraa eegachuun barbaachisaadha. Dinni gantantaraa jirtu kun qabsoo keenya qancarsitee guyyaa kufaatii ishee dheereffachuuf dhagaa hingalagalchine hiqabdu. Mooraa qabsoo saba keenya dantaalee bubuutuu taateen qoqqooduuf tattafachaa turte, ammaas tattaafachaa jirti. Dantaa saba keenyaaf jecha gartuu dhiiga obbolaa keenyaa kumaatamaan dhangalaasaa jirtu kana waliin hariiroo siyaasaa bifa kamiiyyu qabaachuu irraa sabboontotni keenya dammaqiinsaan akka of eeggatan Qeerroon dhaamsa lamummaa dabarsuu barbaada. Keessattuu, qabsaa’onnii fi aktivistoonni keenya biyya alaa keessa socho’aa jiraan shira TPLF karaa kitillayyoota ishee qabsoo Oromoo irratti xaxuuf yaaltaa jirtu irraa jabeessanii akka of eegatan dhaamsa qabsoo dabarsuuf feena.
Ummatni Oromoo Bilisummaa isaa gonfachuuf guyyuu wareegama qaalii gumaachaa jiraachuun isaa ifaadha. Haata’u malee firii wareegama kana saamuuf kanneen karaa boroo duubaa diina waliin walii-galtee gochuuf yaalan mumullachaa dhufaniiru. Isaan kun qabsoo Oromoo dhiiga obbolaa keenyaan injifannoolee cululuqo galmeessaa jirtu kana irraa akka harka isaanii xurii dafanii sassabatan akeekkachiifna. Dalagaan bifa kana sagantaa diinichaa fiixaan baasuuf tattafachuu waliin wal gita waan ta’eef Qeerroon ni balaaleffata. Guyyaan qabsoo itti-fakeessaa geggessan sun darbuu isaa namuu hubachuu feesisa. Bilisummaan saba keenya kennaa TPLFin osoo hintaane gootummaa ilmaan isaatiin kan dhugoomu ta’uun dagatamuu hinqabu. Kana malees, osoo dirqama sirnaa hinqabaatiin qaamni tokko illee Qeerroos ta’e ummata Oromoo kallattiin diina of irraa falamchaa jiru sana bakka bu’ee waliigaltee bifa tokko illee diina waliin mallateessuuf mirga kan itti hiqabne ta’uu isaa firaafis ta’e diinaaf ifa gochuu barbaanna.
Sadarkaa qabsoon keenya amma irra jirtu kanatti ummatni Oromoo qee’ee fi qabeenya isaa oolfachuuf wareegama qaqqalii kallattiin baasaa jira malee, Bilisummaan kiyyaa Atlanta ykn ammoo Oslo fi Berlin irraa naaf dhufa jedhee eegachaa hinjiru. Kanneen Qabsoo sabicha handhura biyyaa irraa gara sochii diasporatti haqaaquun ittiin of beeksisuu yaalaa jiran hundi dalaga fokkataa kana irra atattamaan akka of qusatan carraa kanaan Qeerroon dhaamsa Oromummaa dabrsuuf fedha.
Maayyii irratti ummatni Oromoo milkaa’uu qabsoo isaaf bakka jiru hundaatti wareegamaa fi ittisa barbaachisu gumaachuutti akka cichu Qeerroon waamicha qabsoo dabarsa. Atakaaroo hinbarbaachifne moora qabsoo Oromoo keessaa dhabamsiisaa, aadaa wal amantaa fi wal irratti amantaa guddifachaa deemuun milkaa’ina qabsoo keenyaaf wabii ta’a. Guyyaan TPLF Finfinnee keessaa bookisuu dhaabdu gabaabbachaa dhufeera. Guyyaan ummatni keenya afaan qawwee alagaa jalaa ba’u dhihaateera. Bilisummaan keenya tattaaffii tokkoo-tokkoon keenya guyyuu goonu irratti hundaawa waan ta’eef, namuu qooda isaa ga’ummaan akka gumaachu dhaammataa, Qeerroon Bilisummaa qabsoo sabni isaa miraga ofii gonfachuuf geggessaa jiru kan yeroo kamuu caalaa finiinsuuf murteeffachuu isaa carraa kanaan Lammii isaaaf mirkaneessuu fedha.
Injifannnoon Ummata Oromoof!
Onkolooleessa 11, 2016
« Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee keessatti waraanni guddaan uummata Oromoo Karrayyuufi Wayyaanee jidduutti gaggeeffamaa jiru injifannoo Oromootiin ofdura tarkaanfataa jira.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo(SQ) Qophii Onkoloolessa 11, 2016 »
Isin jaaladhaa sabaa koo injifanno kan keenya jabaadha.
Ashaam,ashaam yaa oromoo koo, sii wargaamaa lamii koo, sii dhangallasa dhiigaa koo,sii cabbsaa laafee koo ,sii kaafalaa gummaa kee yaa sabaa koo , oromiyaa haarrmee koo hinbohiin niijirraan jajjabeen kee qeerroo fii WBO. hin yaaddiin hogansaa jabbaa qabdaa.ABO. INIJIFAANOO UMMATA OROMOO, GADAAN GADAA BILISUMMATII
2016-10-12 1:29 GMT+03:00 QEERROO :
> Firaol commented: “Isin jaaladhaa sabaa koo injifanno kan keenya jabaadha.” >